Imbali kunye nexesha leSihlalo sabakhubazekile
Imbali yeSihlalo esinamasondo
Isitulo sabakhubazekile sokuqala senziwa uPhillip II waseSpeyin.
Akuqinisekanga ngokubhekiselele kwinto enokuthi ithathwa njengesihlalo sabakhubazekile sokuqala, okanye ngubani owayiqulunqa. Isitulo esinamavili esaziwayo sokuqala (esakhiwe ngo-1595 kwaye sibizwa ngokuba sisihlalo esingenalutho) senzelwe uPhillip II waseSpain ngumqambi ongaziwa. Ngomnyaka we-1655, uStephen Farfler, umlindi womlwelwe, wakha isihlalo sokuzikhusela kwisitulo esinevili.
Ngo-1783, uJohn Dawson waseBath, eNgilani, waqulunqa isihlalo sabakhubazekile egama libizwa ngokuba yi-Bath.
UDawson wakha isihlalo esinamasondo amabini amakhulu kunye nelinye elincinci. Isihlalo sabakhubazekile saseBhati sagxotha zonke ezinye izihlalo zabakhubazekile kuyo yonke inxalenye yokuqala yekhulu le- 19 .
Nangona kunjalo, isihlalo sabakhubazekile saseBhat sasingenasisiseko kwaye ngexesha lokugqibela leXesha le-19 kukho uphuculo oluninzi olwenziwe kwizihlalo zabakhubazekile. I-patent ye-1869 yesitulo sabakhubazekile yabonisa imodeli yokuqala kunye neevili eziphambili eziphambili kunye nama-casters amancinci. Phakathi kowe-1867 ukuya ku-1875, abaqambi bangeze iivili zerabha ezingenalutho ezifana nezo zisetyenziselwa iibhasikidi. Ngo-1881, i-pushrims eyongeziweyo yokuzikhusela yenziwe.
Ngowe-1900, iivili zokuqala ezazisetyenziselwa kwizihlalo zabakhubazekile. Ngo-1916, isihlalo sabakhubazekile sokuqala senziwa eLondon.
Ngomnyaka we-1932, injineli, uHarry Jennings, wakha ukuthambisa kokuqala, isitulo sabakhubazekile bensimbi. Yayiyesihlalo esiphezulu sevili esinokuqala njengento ekhoyo namhlanje.
Isitulo sabakhubazekile sakhiwe umhlobo onamahloni onguJennings obizwa ngokuba nguHerbert Everest. Baye basekela u-Everest noJennings, inkampani eyayigxininisa imarike yezihlalo zabakhubazekile iminyaka emininzi. I-suit ye-antiitrust yenziwe ngokuchasene no-Everest no-Jennings yiSebe lezoBulungisa, owamangalela inkampani ngexabiso lokuthenga izihlalo zabakhubazekile.
Icaleni lagqitywa liphuma enkundleni.
I-Wheelchair yokuqala ye-Motorized Wheel-Wheelchair
Izitulo zokuqala zamasondo zazingenawo amandla, kwaye zasebenza ngumgulana ojika iivili zazo zesihlalo ngesandla. Ewe, ukuba isiguli sasingakwazi ukwenza oku, omnye umntu kufuneka ashenxise isihlalo sabakhubazekile nesigulane emva. I-wheel drive okanye i-wheelchair yilapho enye imoto encinane iqhuba iivili ukuba ziphendukele. Imizamo yokwakha i-wheelchair wheelchair yenziwe emva kowe-1916, nangona kunjalo, akukho mpu melelo lwentengiso eyenziwa ngelo xesha.
I-wheelchair yokuqala yamandla kagesi yaqalwa ngumqambi waseCanada , uGeorge Klein kunye neqela lakhe loonjiniyela ngelixa besebenza kwiBhunga loPhando leSizwe laseKhanada kwinkqubo yokuncedisa amaqhawe asemazini abuyele emva kweMfazwe Yehlabathi II. UGeorge Klein naye waqulunqa isibhamu esinesibhakabhaka.
U-Everest noJennings, inkampani efanayo kunye nabasunguli babo abadale isitulo sabakhubazekile beyokuqala ukuvelisa isitulo sabakhubazekile ngombane ngokuqala ngo-1956.
UJohn Donoghue kunye noBraingate baqulunqa iteknoloji entsha yesitulo sabakhubazekile esenzelwe isigulane esinokuhamba ngokukhawuleza, okungeyiphi enye ingxaki yokusebenzisa isihlalo sabakhubazekile ngokwabo.
Isixhobo seBrainGate sisetyenziselwa ingqondo yesigulane kwaye sisigxina kwikhompyutha apho isiguli singathumela khona imiyalelo yengqondo esiphumela kuyo nayiphi na umatshini kuquka nezihlalo zabakhubazekile benza oko bakufunayo. I-teknoloji entsha ithetha ngokuba yi-BCI okanye i-brain-computer interface.
Ngubani owasungula uSaran?
Imbali yezolimo kunye namaFama aseFama
URobert Fulton kunye neNtshutshiso yeSteamboat
Imbali yeSilawuli seSlayidi
Imbali Yokuveliswa Kwezandla: Ukwenza Indwangu
Imbali yoPhuculo olubi
Funda indlela iJet Engine isebenza ngayo
U-Alexander Graham Bell - I-Patent yokuqala yeFowuni
10 Iinkcukacha Ngezikolo Ezizimeleyo
Imbali ye-Ice kunye ne-Skating Skating
Ukuhamba Okugqibeleleyo Ukuhlangabezana Neendlela Zokubuyisela
I-Ethics ne-Reality TV: Ngaba Simele Sibukele?
Ukuchonga nokudibanisa i-Stereotypes and Myths-Based Based Stages
Yayiyintoni Inguqulelo Yenkcubeko YaseChina?
Ukudala iDatabase yokuFikelela kwe-2013 ukusuka kwi-Scratch
ITiresias - Ovid's Metamorphoses
Iiprojekthi zokubuyisela imoto
I-Small Boat Cooling System yokuSebenza kunye nokuSondlo
Indlela Yokubhala Uhlalutyo Lokuziphatha Lokusebenza
Indlela yokwenza iPowimade Perfume
Yayazi 'Abazalwana beNdlu baseCallas' Cast
Amacandelwana aphantsi - Ixesha elidlulileyo, ixesha, indawo kunye nezizathu zemihlathi
Ngaba iiFilimu zeMibhalo ziyakwazi ukudala utshintsho?
Ukubulela Ngaphakathi kweKharityhulam
Ukukhupha isisu kunye nenkolo
Imisebenzi yeCandelo lezeNtlalo ekwakheni izakhono zentlalo
Inkcazo ye-Pronoun, kunye nendlela yokuSebenzisa ngayo
Imfazwe Yomlomo: USS Nautilus (SSN-571)
Yintoni Eyona Nentsingiselo Yemizimba?